Umhla My Pet » The 5 Iimpazamo Ukuthandana Big ukuba amakhosikazi enza
The 5 Iimpazamo Ukuthandana Big ukuba amakhosikazi enza
Ngaba ixesha yembi ukuthandana?
Ingaba kubonakala ukuya kwi amanqaku kwemihla kwaye uthethe amaqashiso babantu intanethi kodwa kubonakala ukuba ungaze ukwenza uqhagamshelwano okanye ukuhlangabezana umntu wakho?
Ukuba ngoko kusenokwenzeka ukuba ngokwenza enye okanye ngaphezulu 'Iimpazamo 5 Ukuthandana Big'. Nantsi ke 5 Iimpazamo Ukuthandana Big yokuba amabhinqa enza, noko ukwenza endaweni.
1. Indlela Dating Nge An Agenda
Ngoko ke abaninzi abafazi bam abathengi ndlela ukuthandana nomntu ajenda kwaye ngokwenene isebenza kubo nempumelelo yabo ukuthandana. Bahlala be khangela umntu yabo, kwaye ukuba abathanga kumbona nangoko nangayiphi amadoda uqhagamshelane kubo indoda ithi wayindulula ngoko nangoko kwaye acinyiweyo ngaphandle ithuba omnye umhla kuphonononga uxhulumaniso (okanye intsilelo) phambili. Kwaye ukuba benza ukuya kumhla nqanaba, umfazi uthwala ajenda ukuze umhla yabo kakuhle ngaphantsi iziphumo ezanelisayo.
Kungakhangeleka counterintuitive ukuthi musani kuba ajenda xa uthandana, emva kokuba zonke ngokuqinisekileyo isizathu uphela thina mhla ukuhlangabezana 'umntu wakho' kunene? Well ewe hayi. Ekugqibeleni nelide lo mnqweno, kunjalo ebihamba ukunciphisa amathuba akho wokufumana loo nqanaba ukuba ndlela ukuthandana nomntu ajenda. Kweli nqanaba mdlalo kubhetele ukuba ukujonga ukuthandana kuba yintoni na - ithuba ukudibana phakathi kwamalungu besini esahlukileyo ikofu, uhamba, ukuyicima njalo. Yiza abantu - IT nje UMHLA - kungekhona ndlebe umtshato, ngoko ke bayakhululeka kancinane kwaye kwangolo hlobo. Luyinto mbono ngqiqweni enjalo ukulindela ukuba uyakwazi wazi ukuba umntu neqabane ubomi bakho ukususela kwenye intlanganiso beziko ngumntu.
Ukuba uyazi indlela yam bethandana abafazi niya kwazi ndinicebisa ndithandana ngokuba unyango nelokulungisa iipatheni nolwalamano olubi. Kodwa ngaphezu koku ukuthandana lwenzelwe ukuba kuba mnandi nokukhanya zilumkileyo. Ukuba uzakuhamba ne-ajenda malunga asakhangela ukuba le ndoda yakho ubeka Makhesenze kuxinzelelo yonke imeko, kwaye kuthetha ukuba wena okanye umhla wakho uya kuba nako ukuyekelela abone amava. Akuyi kuba nako ukuba babe nesidima okusemandleni akho yaye akayi. Ngoko behlise ajenda kwaye wenze entsha - ukuba ezintsha, amava ezonwabisayo ukukhanya-abantliziyo nabantu abatsha.
2. Kulawula Men Out Too Ngokukhawuleza
Njengoko kunye impazamo yokuqala inkulu, impazamo 2 yenye indlela abafazi batole ngokwabo kwi unyawo xa uthandana. abafazi abaninzi ntshona kuluntu lwanamhlanje balawulwa 'chemistry' bavakalelwa xa kufikwa ukwenza izigqibo zabo kunye nabantu, kwaye ndibona oku angene nazo zonke iintlobo ixesha lembandezelo kunye nexesha kwakhona. Chemistry ithande ukuba ube luphawu ihlwempu nokuba indoda kuba liqabane entle kuwe. Enyanisweni chemistry olunzulu kudla sisilumkiso kubafazi abangalenzanga ukhetho ubudlelwane enkulu elidlulileyo. Amaninzi amadoda ezilungileyo Unokuwuqhawula ngoyaba ngokupheleleyo kuba Wayesoyika UIan ngaloo mhla wokuqala kwaye musa ndilungise mingxunya kwisebe chemistry. Kuba namankazana nesakho kunokuba luthabath ixesha indoda elungileyo. Ngoko ukuba indoda litenxile okanye cwaka elinye ithuba, enyanisweni kukunika imihla emininzi mfutshane kuye ubone ukuba akathanga uphume eqokobheni kuwe aze atshise nendoda enomtsalane, mhlawumbi 'indoda yakho'. Musa ukuzikhathaza nokuba uyakucinga ukuba ngoku (ukubona impazamo 1).
3. Indlela Umhla With A Checklist
impazamo 3 Iyafana icinge 1 kwaye nje umonakalo, ukuba mandundu. Ndiyazi ukuba abafazi abaninzi kuba 'uluhlu' imvo iimpawu ukuba bafuna (okanye ucinga ukuba bafuna) umntu. Akukho nto iphosakeleyo kukufumana ngokucacileyo into ofuna kwi ladies yakho liqabane elifanelekileyo, ke makhe kungena angazaliseka uluhlu bethu kuba ezinye zazo kukulavuza ingundoqo kwaye àbakhonzi nani lonke!
Uluhlu luhlala ixesha elide kakhulu yaye ngokuqhelekileyo ngayo izinto ukuba okunene ezingquzulanayo ngokwabo! Umzekelo kwakusenokufuneka 'ezolileyo umva' ilungelo ecaleni 'ndiyazingca ngamandla'. Ke andiyi ndikutsho ukuba awukwazi zonke ezo mpawu kumntu omnye, nto nje ngokuqhelekileyo indoda ithande omnye neyomnye. Ngoko apho na? Kwakhona ngamanye amaxesha uluhlu bethu izinto ngaloo zilula ukuze, ezifana 'umzimba' okanye 'izihlunu'. Yiza oosisi! Akukho nto iphosakeleyo ngokuba ezikhethwa emzimbeni kodwa ngenene uza ukukhetha iqabane lakho ubomi ingaba wa inki umzimba wakhe? Ngaba ucinga ukuba oku kuya akuzisele ubudlelwane ilungileyo ebomini bakho? Kuthekani iimpawu ngokwenene umcimbi, ezinjengokunyaniseka, ukunyaniseka, ububele, amandla (lwengqondo) kwaye nangokunjalo?
umfazi ngamnye ukuba isigqibo into ebalulekileyo kuye. Noko ixesha nexesha kwakhona ndiyibonile uluhlu uphoswe xa ekugqibeleni umfazi udibana naye ubomi, yaye ngokuqhelekileyo yahluke ngokupheleleyo kwindoda yayambethe uluhlu lwakhe! Yaye yonwabile. Ngoko icebiso lam - babalahle uluhlu! okanye, ukuba kufuneka kube, uwugawule ukuba ubuninzi nje 5 iimpawu ezibalulekileyo. Sebenzisa oko njengesikhokelo jikelele ayithathi uluhlu.
4. Zama Nzima
Ngoko ke ekugqibeleni ndadibana nomntu ofana nawe, wena phandle ngomhla naye kwaye uziva u soyika. Ke ngoku wenzantoni? ukuba uthethe. Ukuba kukho umsantsa kwincoko ugcwalisa oko. Kucebisa ukuba kuya, ukuba dazzle kuye neentsomi kaJona, ube, wambonisa wit yakho abengezelayo kwaye ukuba kuye ndithungwe phezu uburharha yakho. Kwaye kunjalo, ukuba ucela ahlawule isiqingatha yakho kumhla, okanye mhlawumbi wena ufumane yonke oyilwayo - ukuba ungumfazi namhlanje emva kokuba zonke. Kwaye izakuba ENKULU! Yena ehleka kunye nawe, kwaye kukho unxibelelwano, ukuba uziva ngayo. kodwa, ngoko akazange ubiza. Yena uya ebandayo liyalahleka emva isibini kwemihla. Ngoko ke yintoni ehambe ngokungekho?
Kakuhle abantu abaninzi bakhetha ukuba izakuthatha indima kumntu oyindoda ulazi, kwaye ukuba wenza konke okanye nayiphi na kwezi zingentla, okunene wamtyhala kule ndima, intsingiselo ukuba emthintelayo ekosulelweni ngokweemvakalelo imali kuwe. umtsalane nokuzinikela neemvakalelo abantu ukuze bawe xa kufuneka ubeke ezinye iinzame. Usenokucinga ukuba ukuba unomtsalane nezinomtsalane ke ayiyi balekani kakhulu kwixesha elide nabantu abaninzi. Kusenokwenzeka kunandipha ixesha kunye nawe, ukuze kuhleka kunye nawe kwaye zinokude umhla wesibini, Noko ke kusenokwenzeka ukuba bagqibele umntu - ngomnye 'nzima' ngumfazi lowo uye waba nayo ukuba kweenzame ezininzi.
Kufuneka ukuba ibe kho incoko, esonwabisa wena wacebisa nendawo. Ukuba ufuna zivuse iimvakalelo zakhe ezinzulu makabe kukhokelela kwaye womelele ngokwaneleyo ukuba ukulandela. Khululeka nokuziqhelanisa Ngokubakho nokunandipha amava endaweni.
5. Yiba An Ice Ntombazana
Ekubeni ice intombi licala flip kuzama nzima kakhulu. Amanye amabhinqa ukwazi inani impazamo 4 kwaye ngoko ke thabatha kwabanye ngokugqithileyo kwaye ube likheswa kakhulu kwaye lungafumaneki. Nangona ukuze kuya kuba nzima ukufumana 'kunye' Ixabiso eliphezulu ', ukuba nikhutshelwe kude kakhulu le ndlela unako ukuza off ukuba bengenamdla, engafumanekiyo, abangenabubele kunye nokuba snobby. Kusuke kuvakale kancinane abandayo amadoda amaninzi, kunye namadoda amaninzi izakunikezela intle ngokukhawuleza emkhenkceni intombi, ngaphandle kwabo banomdla nje mngeni izilwanyana, kwaye awufuni olu hlobo lomntu njengoko kungenzeka ukuwaphosa wena kanye izilwanyana igqithile ugqithele komnye umfazi.
Kufanele ukuba kubekho ulungelelwano phakathi ilaliswe umva / ndivuma ukuba akhokele kwaye nangoku zisaluswa abanomdla neVulekileyo. Ukuba ungafumana le eseleyo kunene uya kuba nexesha enkulu ukuthandana. Eyona nto iphambili ukuba ukukhumbula ukuba nje kuba wena. Fumana womelele ngokwenene ngaphakathi wena uze bekhululekile kulusu lwakho. Ukuthandana ndingekawuboni ayinakukunceda kule!
Ngoko ke hamba uye phaya phezulu zonke musa ukuthandana ngokobuqu kakhulu. Ngeke wazi ukuba kuqhubeka ntoni kuba omnye umntu. Ukunyanga kuyo ngathi 'ndlela' kuyonwabisa yaye iya kusebenza kuwe.